इटालियन पिज्जा बनाउँने हो ? यसरी सिक्नुहोस् - भिडियो सहित - ज्ञानविज्ञान
तपाई इटालियन पिज्जा बनाउँन चाहनु हुन्छ ? पिज्जाका पारखीहरुका लागि यो तरिका एकदमै सजिलो तरिका हो ।
यदि तपाईको घरमा पिज्जा तताउँनका लागि ओभन छ भने यो असाध्यै सजिलो तरिका हो ।
घरैमा पिज्जा बनाउँने हो भने स्वाद र मिठास आफुले चाहे जस्तै हुन आउँछ ।
एक त अनावश्यक खर्च नहुने, बचत बढ्ने हुनाले घरमा आर्थिक सबलता आउँछ र पारिवारिक तनाव कम हुने सम्भावना अत्याधिक हुन्छ भने अर्को सबै मिलेर नयाँ नयाँ परिकार बनाउँन कोशिस गर्नुको आनन्द नै फरक हुन्छ । यसले परिवारमा मनोरञ्जन गराउँदै आत्मियता बढाउँछ ।
भने पछि ‘आज खाजा के खाने ?’ भन्ने चिन्ता लिनु भन्दा ‘आज खाजामा के नयाँ परिकार बनाउँने’ भन्ने सोच्न थाल्ने हो कि ! नयाँ परिकार बनाउँनलाई आजका लागि भने हामीले व्यवस्था गरिदिएका छौँ । यसका लागि चिन्ता लिनु पर्दैन ।
पिज्जा बनाउँने सबै भन्दा सजिलो तरिका भिडियोमा हेर्नुहोस् । यदि नखुलेमा यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
Don't Miss it ममको लागि मिठो अचार बनाउँने तरिका – भिडियो सहित
Up Next काक्रो अचारमा यति थोरै कुरा याद गर्ने हो भने अचम्मै मिठो बन्ने रहेछ – भिडियो सहित
पिसाब रोक्दा निम्तिन सक्छन् यी समस्याहरु, जानिराखौ
६ खाना जस्ले रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउने
यी कुराहरुको मात्रै प्रयोग गर्न सकियो भने रोग प्रतिरोधक क्षमतामा बृद्धि गर्न धेरै सोचिरहनै पर्दैन । बदाम दैनिक ८ देखि…
दालचिनीका फाइदा थाहा पाउनुहोस्
चिसोले कपाल दुखेमा : दालचिनी र मरिचको लेप बनाएर विहानरवेलुका निधार र कन्चटमा लगाउने गरेमा चिसोले कपाल दुखेको ठिक हुन्छ…